FUN Keyboard ကို - ချစ်စရာအီမိုဂျီ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » personalization Apps ကပ » FUN Keyboard ကို - ချစ်စရာအီမိုဂျီ, စတစ်ကာများ, Themes & GIF ကို
FUN Keyboard ကို - ချစ်စရာအီမိုဂျီ, စတစ်ကာများ, Themes & GIF ကို APK ကို
ရှိသည် NEW စတစ်ကာ Store က အီမိုတီကွန် now.Custom ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်စိတ်ကြိုက်, ခေတ်မှီစတစ်ကာများ (FUNmoji) ၏ထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့အတူ FUN Keyboard ကိုအတွက်
- သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံရိပ်ကိုဖန်တီး 30 + ရုပ်ပြောင်ရှိပါတယ်။
- ထိုသို့သောမင်္ဂလာပါ OK ကိုမ, ကျေးဇူးတင်စကားနှင့်တွေအများကြီးအဖြစ်ရေပန်းစားစကားလုံးများကိုအမျိုးမျိုးဖုံးအုပ်။
FUN Keyboard ကို Android အတွက်တစ်ဦးအီမိုဂျီ, ရုပ်ပြောင်များနှင့် GIF ကိုကီးဘုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ 2000 + အီမိုဂျီ, ရုပ်ပြောင်, GIF များ, FUN Keyboard ကိုအတွက်စတစ်ကာများနှင့်အတူ, FUN Keyboard ကို Facebook, Twitter, Instagram ကို, Messenger ကို, WhatsApp ကိုအတွက်ချက်တင်တက်မြိန်ရန်သင့်အားကူညီပေးသည်။ Voice ကိုအနှစ်ချုပ်များ၏ပိုမြန်လက်အခမဲ့စာရိုက်နှင့်အတူ, FUN Keyboard ကိုသတ်ပုံစာသားနှင့်သင့် input ကိုမြန်နှုန်းမြှင့်တင်ရန်မိန့်ခွန်းခွင့်ပြုပါတယ်။ ချစ်စရာအီမိုဂျီ, စတစ်ကာများ, Themes & GIF ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာရိုက်ထည့်နှင့်အေးမြ GIF များပေးပို့ရန်နှင့်သင်၏မိတ်ဆွေများအလွန်အံ့သြစေရန် emojis - FUN Keyboard ကိုရန်သင့်ကီးဘုတ် Upgrade!
【 feature ကိုမီးမောင်းထိုးပြ】
2000 + ချစ်စရာအီမိုဂျီရုပ်ပြောင်, အေးမြဖောင့်, ရယ်စရာ GIF များ, အပြုံးမျက်နှာပေးပို့ဖို့လွယ်ကူပါတယ်
သင့်ရဲ့စာရိုက်မြန်နှုန်းမြှင့်တင်ရန်အတွက် Smart ကီးဘုတ်စာရိုက်, လက်ဟန်ခြေဟန်စာရိုက်ခြင်းနှင့်အသံဖြင့် input ကို။
လုံးဝသင့်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန် customizable layout ကို
Messengers, Facebook, WhatsApp ကို, Instagram ကိုအားလုံးသင့်ရဲ့ apps တွေအတွက်ပံ့ပိုးမှု။
တစ်ကမ္ဘာလုံး 73 ကျော်ဘာသာစကားများနှင့်အတူစမတ် input ကို
NEW စတစ်ကာ Store က
- ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်စိတ်ကြိုက်, ခေတ်မှီစတစ်ကာများထောင်နဲ့ချီတဲ့။
- အအီမိုဂျီစတစ်ကာများကိုပိုပြီးပျော်စရာဆက်သွယ်လုပ်သင့်သူငယ်ချင်းများမှပေးပို့ဖို့အသုံးပြုကြောင်း FUN Keyboard ကိုတစ်ဦးအခမဲ့, စိတ်ကြိုက် extension ကိုပါ!
ရယ်စရာအီမိုဂျီ Keyboard ကို
- အအေးဆုံးသို့လွင်ပြင်စာသားကို boring Turn နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရုပ်ပြောင်များနှင့်အပြုံးပုံ FUN Keyboard ကိုရင်ဆိုင်ရ !!
- FUN Keyboard ကိုလည်းဂျပန်ရုပ်ပြောင်ရှိပါတယ်
- Android အတွက်ခံစားချက်တွေကိုနှင့်စိတ်ခံစားမှုကိုတင်ပြပေးဖို့အများဆုံးဖော်ပြရုပ်ပြောင် & အီမိုတီကွန်၏အကြီးစားစာကြည့်တိုက်
👀 Animated GIF ကိုKeyboard👀
- FUN Keyboard ကိုအားလုံး GIF များ Facebook, Twitter, Instagram ကို, Messenger ကို, WhatsApp ကိုနဲ့တူမဆိုလူမှုရေး platform ပေါ်တွင် shareable များမှာ
- Funny ကာတွန်း GIF များ Android အတွက် GIF ကိုကီးဘုတ်အတွက်စာရိုက်နှင့်အတူပေးပို့အကြောင်းကြားနိုင်ပါကြောင်း
- နယူးအခမဲ့ရုပ်ရှင် GIF များ, စာကြည့်တိုက်အတွက်ကာတွန်း GIF များ update ကို FUN Keyboard ကိုအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်း
အစာရှောင်ခြင်းစာရိုက် & Voice ကိုအနှစ်ချုပ်များ - ကီးဘုတ်ပေါ် Single-handedly မက်ဆေ့ခ်ျရိုက် FUN Keyboard ကိုနှင့်အတူမြန်ဆန်စွာရိုက်ပွတ်ဆွဲ။
- Voice ကို input ကို, FUN Keyboard ကိုထောက်ခံမှုအသံထည့်သွင်း, ပိုမြန်ပြီးပိုတိကျမှုနှင့်အတူ - FUN Keyboard ကိုသငျသညျချောမွေ့လက်ဟန်ခြေဟန်စာရိုက်နှင့်အတူပိုမိုမြန်ဆန်ရိုက်ထည့်ရန်အထောက်အကူပြု! - FUN Keyboard ကိုသငျသညျစာရိုက်နှငျ့သငျတိကျမှုနောက်စကားလုံးခန့်မှန်းကမ်းလှမ်းနေသောစကားများ Auto-ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်!
ပိုမြန်ရိုက်ထည့်နှင့်အေးမြ GIF များပေးပို့ဖို့ချစ်စရာအီမိုဂျီ, ရုပ်ပြောင်, GIF, နှင့်သင့်သူငယ်ချင်းများကိုအလွန်အံ့သြစေရန် emojis - FUN Keyboard ကိုရန်သင့်ကီးဘုတ် Upgrade!
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှဖန်တီးမှုဒီဇိုင်းများ၏အတွေးအခေါ်များမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် !! သငျသညျသင်တို့၏အကြံအစည်မျှဝေစိတ်ဝင်စားပါက, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ! ထုတ်ကုန်တွေ့ကြုံခံစားခြင်းနှင့်ဖွင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ရေးအတူတကွတိုးတက်ပါစေ !!
🏻Facebook ကစာမျက်နှာ: goo.gl/hsVMvY
Facebook ကအဖွဲ့များ: goo.gl/iBYZVX
1. custom အီမိုတီကွန် (FUNmoji) ကဆက်ပြောသည်။
- သင့်ကိုယ်ပိုင်ပုံရိပ်တွေကနေ Created စတစ်ကာများ
- 30 ရုပ်ပြောင်ကဆက်ပြောသည်
- သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်စောင့်ဆိုင်းပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ features တွေ!
2 ။ bugs fixed နှင့်တည်ငြိမ်ရေး optimized ။
FUN Keyboard ကို - ချစ်စရာအီမိုဂျီ, စတစ်ကာများ, Themes & GIF ကို
27.46 ကို MB
FUN Keyboard ကို & အီမိုဂျီ Keyboard ကို
Tambu Keyboard ကို